Shiinaha soo saarayaasha baaldiyeyaasha dhulka hoostiisa mara iyo alaab-qeybiyeyaasha | MINYAN
Qoditaanka saameynta hoose, qalabka abrasionka hoose sida wasakhda, loam, iyo halabuur isku dhafan ee wasakhda iyo quruurux fiican. Tusaale: Xaaladaha qoditaanka ee nolosha guud ee waajibka ah ay ka badan tahay 800 saacadood. Caadi ahaan baaldiyooyinka guud ee waajibaadka guud waa cabbirada ugu caansan, waxaana u adeegsada horumariyeyaasha bogagga si ay si ballaaran ugu soo qotaan codsiyada abrasion-ka hooseeya. Qaab dhismeedka khafiifka ahi wuxuu yareeyaa waqtiga culeyska wuxuuna kordhiyaa culeyska la qaadi karo. Adabbarada cabbirka iyo talooyinka.
Baaldiga caadiga ah waa nooca caanka ah ee dhexda iyo mini qodista, wuxuu la qabsadaa dhumucda saxanka caadiga ah mana jiro farsamo farsamo oo cad oo lagu shaqeyn karo. Dabeecadda: awoodda baaldi waa weyn tahay, aagga baaldi afka waa weyn yahay oo wuxuu leeyahay dusha sare Sargaal a, sidaas darteed waxa uu leeyahay isku dheelitir ah buuxinta sare, badbaadinta waqtiga hawlgalka iyo oolnimada sare. Baaldikani wuxuu ku habboon yahay jawiga shaqada ee fudud, sida qodista dhoobada iyo rarka ciidda, carrada iyo quruuruxa. Faa’iido darrida ayaa ah dhumucda saxanka waa yar tahay, la’aanta saxanka xoojinta, sidaa darteed waqtiga adeeggu wuu gaaban yahay.
Waxaan ku siinnaa baaldiyo kala duwan oo buuxa mashiinada laga bilaabo 0.01cbm ilaa 12cbm oo ku jira awoodda baaldi loogu talagalay codsiyo badan oo kala duwan. Codsiyada waxaa ka mid ah dhismaha fudud iyo guud, dhismaha waddooyinka iyo tareennada iyo sidoo kale qodista iyo warshadaha macdanta.Waxaan ku soo saarnaa dhammaan baaldiyo caan ah bir tayo sare leh. Waxaan ku siin karnaa lifaaqyo inta badan dhammaan noocyada qodista godadka.
Ka sokow baaldiyo caadi ah, baaldiyo dhagax ah iyo baaldiyo culus, waxaan kaloo bixinnaa baaldiyo ujeedo gaar ah leh, sida baaldiyo loo jaro, baaldiyo gacmeedka Haydarooliga, baaldiyo Qalfoof ah, baaldiyo Nadiif ah, baaldiyo wax lagu qabsado, baaldiyo, baaldiyo majaajillo, ripper, baaldiyo ripper ah lifaaqyada qodistaada.Baakad & GaarsiinUnugyada Iibinta: Hal shayCabir hal xirmo: 20X20X20 cmMiisaanka guud ee keli ah: 60.000 kg
Nooca Xirmada:Sariirta caalamiga ah ama kiiska qoryaha. 1. hal 20GP wuxuu ku shuban karaa 12-14 gogo '1.0m3 ama 1.2m3 baaldiyo oo loogu talagalay qodista 20ton (Width in ka yar 42 inji) 2. mid 40HC ah ayaa ku shuban kara qiyaastii 26-28 gogo '1.0m3 ama 1.2m3 baaldiyo oo loogu talagalay qodista 20ton; 3. hal 20GP wuxuu ku shuban karaa 8 gogo '1.6m3 baaldiyo 30ton qod; 4. mid 40HC ah wuxuu ku shuban karaa ilaa 16 gogo '1.6m3 baaldiyo 30ton qod.
Tirada (Cadad) 1 - 2 3 - 10 11 - 20 > 20
Est. Waqti (maalmo) 15 35 49 In lagu gorgortamo
Hawlaha qodista iyo rarka caadiga ah ee dhoobada, ciidda ama waxyaabo kale oo dabacsan oo leh qashin yar ama aan lahayn ama dhagax weyn, qaabka ugu habboon wuxuu dammaanad qaadayaa guryaha qodista iyo awoodda ballaaran.
Qalabka baaldi loogu talagalay goobta
Adabtarada, Ilkaha, magaabay dhinac
Inta badan loo isticmaalo qodista iyo ciidda, quruurux iyo
ciidda iyo jawiga kale ee culeyska fudud ku shaqeeya.
Badanaa waxaa loo isticmaalaa qodida carrada adag, oo lagu qasay a
dhagax jilicsan iyo dhoobo qaraabo, dhagaxyo jilicsan iyo
jawiga kale ee hawlgalka culeyska fudud.
Adabtarada, Ilkaha, magaabay Side /
Badanaa waxaa loo isticmaalaa macdanta quruurux adag oo lagu qasay
carro adag, dhagax adag ama dhagax adag, ka dib
qarax ama rar, iyo rar culus.
Adabtarada, Ilkaha, Difaacaha Side, Shrouds Geeska
Badanaa waxaa loo isticmaalaa xaaladaha abrasion aad u sarreeya
oo ay ku jiraan dhagax adag oo quartzite ah,
dhagaxa ciida iyo macdanta.
Waxaa loo adeegsaday jawi shaqo fudud oo leh wax yar
Waxaa loo adeegsaday wabiyada, balliyada iyo deegaanka biyamareenka.
Loo adeegsaday nadiifinta shaqada kanaalka iyo boholaha.
Lagu dabaqay isku-darka shaandhaynta iyo qodista
oo ah qalab dabacsan.
XUSUUS: OEM ama Waxsoosaar La-Sameyn Karo Oo La Heli Karo
Hore: Mini baaldi qaaddo yar 70 ballaaran
Xiga: baaldi dhagax weyn